What to do if your baby get fever after immunization? – My Doctor
What to do if your baby get fever after immunization?
သင့်ကလေး ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အဖျားတက်ရင် ဘာတွေလုပ်မလဲ
သားသမီးတစ်ယောက် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သည်နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်တတ်သည်မှာ မိဘတိုင်း၏ မေတ္တာပင်ဖြစ်သည် ။ မိမိသားသမီးခံစားနေရသည့် ဝေဒနာသက်သာစေရန် ဘာလုပ်ရလုပ်ရဆိုသည်မှာ မိဘတိုင်းပင်ဖြစ်သည် ။
ကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ ကလေးငယ်တိုင်းအတွက် ထိုးကိုထိုးရ သောက်ရမည့် ဆေးပင်ဖြစ်သည် ။ သို့မှသာ ရောဂါဆိုးများ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့်ရောဂါများမှ ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ သို့သော် ကလေးတချို့တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက် အဖျားအနည်းငယ်တက်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရတတ်ပါသည် ။ ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပြုစုနည်းတွေ ရှိလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အဖျားတက်တာ စိုးရိမ်ရလား ?
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အဖျားအနည်းငယ်တက်တယ်ဆိုတာ တချို့ကလေးတွေမယ် တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဒီလိုအဖျားတက်တာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီလိုအဖျားတက်ခြင်းဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားဟာ ကာကွယ်ဆေးကို တုံ့ပြန်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကြောင့်မို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး အဖျားအနည်းငယ်တက်ခြင်းဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဆိုသော်လည်း မိဘတစ်ယောက်အနေဖြင့် သင့်ကလေး သက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်လိုသည်မှာ မိဘတိုင်းလိုလိုပင်ဖြစ်သည် ။ ထို့အတွက် အောက်ပါအချက်များကို သင့်ကလေးသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်
မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ အနီးကပ်ရှိနေမှု နွေးထွေးမှုတို့ဟာ နာမကျန်းဖြစ်ချိန် ကလေးငယ်တိုင်းအတွက် အဖိုးဖြတ်မရတဲ့ အားဆေးပဲဖြစ်သည် ။ ကလေးငယ်နံဘေးတွင် သက်သာစေရန် အားပေးစကားပြောခြင်း ၊ ဖေးမယုယခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည် ။
၂ ပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်လဲလှယ်ပေးခြင်း
ထူထဲသော အဝတ်များ ၊ စောင်များဖြင့် ထုပ်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။ ပေါ့ပါးချောင်ချိသော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ပေးခြင်း စောင်အပါးလေး ခြုံပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ ။
အဖျားရှိခြင်းဟာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုဖြစ်စေသည့်အတွက် သင့်ကလေးကို ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးစေရန် အရည်များများတိုက်ကျွေးပေးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
၄ အခန်းတွင်း အိမ်တွင်း လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပါ
အိမ်အတွင်း အခန်းအတွင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး လေကောင်းလေသန့် ရရှိရန်အတွက် ပြတင်းပေါက်များ ဖွင့်ပေးခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါ ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အဖျားအရမ်းကြီးရင် ဘယ်လိုသိမလဲ ?
အကယ်၍ ကလေးဟာ အဖျား ၁၀၀ ဖာရင်ဟိုက်ခန့်ရှိလျှင် အဖျားရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပြီး လစ်လျူရှုမထားရတော့ပါ ။ အနီးစပ်ဆုံး ဆေးခန်း ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အမြန်ဆုံးပြသပါ ။
* သုံးလအောက် ကလေးငယ်များတွင် အဖျား ၁၀၁ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် နှင့်အထက်ရှိလျှင်
* သုံးလမှခြောက်လအကြားကလေးငယ်များတွင် အဖျား ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်နှင့်အထက်ရှိလျှင်
* အဖျားရှိချိန် ကလေးငယ်သည် မှိန်းနေပြီး နှုံးခွေနေလျှင်
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး အဖျားတက်ခြင်းဟာ ၂၄ နာရီထက် မကျော်သင့်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်အဖျားက ၂၄ နာရီကျော်လာပြီး
* သင့်ကလေးငယ်ဟာ အရမ်းနှုံးခွေနေမယ်
* အစာ သို့မဟုတ် ရေ မျိုရခက်မယ်
* အန်မယ် ဝမ်းလျှောမယ်
အစရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရှိရင် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသပါ ။
DrMay ThantSyn	2018-11-15T14:37:01+00:00	November 15th, 2018|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|0 Comments